33 Idzi ndidzo dzaiva nzendo dzevanakomana vaIsraeri vakabuda munyika yeIjipiti+ vari mumauto+ avo vachitungamirirwa naMosesi naAroni.+ 2 Mosesi akaramba achinyora nzvimbo dzavaibva nenzendo dzavo paairayirwa naJehovha; uye idzi ndidzo dzaiva nzendo dzavo vachibva pane imwe nzvimbo vachienda kune imwe:+ 3 Vakatama kuRamesesi+ mumwedzi wokutanga, pazuva rechigumi nemashanu romwedzi wokutanga.+ Zuva chairo rakatevera paseka+ vanakomana vaIsraeri vakabuda noruoko rwakasimudzwa, vaIjipiti vose vachizviona.+ 4 Munguva iyi yose vaIjipiti vakanga vachiviga vaya vakanga vaurayiwa naJehovha pakati pavo, iwo matangwe ose;+ uye Jehovha akanga atonga vanamwari vavo.+ 5 Naizvozvo vanakomana vaIsraeri vakatama kuRamesesi+ vakanodzika musasa kuSukoti.+ 6 Vakatamazve kuSukoti vakanodzika musasa kuEtamu,+ iri kumucheto kwerenje. 7 Vakatamazve kuEtamu vakadzoka nechokuPihahiroti,+ iri pakatarisana neBhaari-zefoni;+ vakanodzika musasa pamberi peMigdhori.+ 8 Pashure paizvozvo vakatama kuPihahiroti vakapfuura nepakati pegungwa+ vachienda kurenje,+ vakaramba vachifamba rwendo rwemazuva matatu murenje reEtamu,+ vakanodzika musasa kuMara.+ 9 Vakatamazve kuMara vakasvika kuErimu.+ Zvino kuErimu kwaiva nezvitubu zvemvura gumi nezviviri nemichindwe makumi manomwe. Naizvozvo vakadzika musasa ipapo. 10 Vakatamazve kuErimu vakanodzika musasa pedyo neGungwa Dzvuku. 11 Pashure paizvozvo vakatama paGungwa Dzvuku vakanodzika musasa murenje reSini.+ 12 Vakatamazve kurenje reSini vakanodzika musasa kuDhofka. 13 Gare gare vakatama kuDhofka vakanodzika musasa kuArushi. 14 Vakatamazve kuArushi vakanodzika musasa kuRefidhimu.+ Ikoko kwakanga kusina mvura yokuti vanhu vanwe. 15 Pashure paizvozvo vakatama kuRefidhimu vakanodzika musasa murenje reSinai.+ 16 Naizvozvo vakatamazve kurenje reSinai vakanodzika musasa kuKibroti-hataavha.+ 17 Vakatamazve kuKibroti-hataavha vakanodzika musasa kuHazeroti.+ 18 Pashure paizvozvo vakatama kuHazeroti vakanodzika musasa kuRitma. 19 Vakatamazve kuRitma vakanodzika musasa kuRimoni-perezi. 20 Vakatamazve kuRimoni-perezi vakanodzika musasa kuRibna. 21 Gare gare vakatama kuRibna vakanodzika musasa kuRisa. 22 Vakatamazve kuRisa vakanodzika musasa kuKeherata. 23 Vakatamazve kuKeherata vakanodzika musasa kuGomo reSheferi. 24 Pashure paizvozvo vakatama kuGomo reSheferi vakanodzika musasa+ kuHaradha. 25 Vakatamazve kuHaradha vakanodzika musasa kuMakiheroti. 26 Vakatamazve+ kuMakiheroti vakanodzika musasa kuTahati. 27 Pashure paizvozvo vakatama kuTahati vakanodzika musasa kuTera. 28 Vakatamazve kuTera vakanodzika musasa kuMitka. 29 Gare gare vakatama kuMitka vakanodzika musasa kuHashmona. 30 Vakatamazve kuHashmona vakanodzika musasa kuMoseroti. 31 Vakatamazve kuMoseroti vakanodzika musasa kuBhene-jaakani.+ 32 Pashure paizvozvo vakatama kuBhene-jaakani vakanodzika musasa kuHo-hagidhigadhi. 33 Vakatamazve kuHo-hagidhigadhi vakanodzika musasa kuJotbhata.+ 34 Gare gare vakatama kuJotbhata vakanodzika musasa kuAbrona. 35 Vakatamazve kuAbrona vakanodzika musasa kuEziyoni-gebheri.+ 36 Pashure paizvozvo vakatama kuEziyoni-gebheri vakanodzika musasa kurenje reZini,+ iko kuKadheshi. 37 Gare gare vakatama kuKadheshi vakanodzika musasa kuGomo reHori,+ riri pamuganhu wenyika yeEdhomu. 38 Mupristi Aroni akakwira muGomo reHori arayirwa naJehovha, akanofira imomo mugore rechimakumi mana vanakomana vaIsraeri vabuda munyika yeIjipiti, mumwedzi wechishanu, pazuva rokutanga romwedzi wacho.+ 39 Aroni akanga ava nemakore zana nemakumi maviri nematatu paakafira muGomo reHori. 40 Zvino muKenani, iye mambo weAradhi,+ zvaakanga achigara muNegebhu,+ munyika yeKenani, akanzwa nezvokuuya kwevanakomana vaIsraeri. 41 Kwapera nguva yakati, vakatama kuGomo reHori+ vakanodzika musasa kuZarimona. 42 Pashure paizvozvo vakatama kuZarimona vakanodzika musasa kuPunoni. 43 Vakatamazve kuPunoni vakanodzika musasa kuObhoti.+ 44 Vakatamazve kuObhoti vakanodzika musasa kuIye-abharimu pamuganhu weMoabhi.+ 45 Gare gare vakatama kuIyimu vakanodzika musasa kuDhibhoni-gadhi.+ 46 Pashure paizvozvo vakatama kuDhibhoni-gadhi vakanodzika musasa kuArimoni-dhibrataimu. 47 Vakatamazve kuArimoni-dhibrataimu+ vakanodzika musasa kumakomo eAbharimu+ pakatarisana neNebho.+ 48 Pakupedzisira vakatama pamakomo eAbharimu vakanodzika musasa pamapani erenje eMoabhi+ pedyo naJodhani kuJeriko. 49 Vakaramba vakadzika musasa pedyo naJodhani kubvira kuBheti-jeshimoti+ kusvikira kuAbheri-shitimu+ pamapani erenje eMoabhi. 50 Zvino Jehovha akataura naMosesi pamapani erenje eMoabhi pedyo naJodhani kuJeriko,+ achiti: 51 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Muchayambuka Jodhani mopinda munyika yeKenani.+ 52 Munofanira kudzinga vagari vose vomunyika yacho pamberi penyu moparadza zvidhori zvavo zvose zvematombo,+ munofanira kuparadza mifananidzo yavo yose yakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa,+ uye munofanira kutsakatisa nzvimbo dzavo tsvene dzose dzakakwirira.+ 53 Munofanira kutora nyika yacho kuti ive yenyu mogara mairi, nokuti ndichakupai nyika yacho kuti ive yenyu.+ 54 Munofanira kukamurirana nyika yacho kuti ive yenyu muchishandisa mujenya+ maererano nemhuri dzenyu.+ Munofanira kuwedzera nhaka youyo ane vanhu vazhinji, uye munofanira kutapudza nhaka youyo ane vashoma.+ Kwaacharatidzwa nomujenya, ndiko kuchava kwake.+ Munofanira kuzvipa nhaka yenyika yacho maererano nemadzinza emadzibaba enyu.+ 55 “‘Asi kana musingazodzingi vagari vomunyika yacho pamberi penyu,+ vaya vamunosiya vachava sezvinobaya mumaziso enyu uye seminzwa mumativi enyu, uye vachakunetsai munyika yamuchange muchigara.+ 56 Zvino ndichakuitirai sezvandakanga ndafunga kuvaitira.’”+